Nahazo loka ara-kolontsaina lehibe ny Foibe ara-kolontsaina Fendika ao Addis Ababa · Global Voices teny Malagasy
Nipoa-tsatroka tamin'ireo asan'ny Fendika tamin'ny zavakanto sy kolontsaina ny loka
Voadika ny 28 Janoary 2021 5:08 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, русский, Italiano, Ελληνικά, English
Tarika mpihira monina ao Addis Ababa i Fendika. Tarihan'ilay mpandihy/mpanao soradihy Melaku Belay, mamelona toerana iray, mitety, mandrakitra ary manatontosa hira amin'ny alalan'ny anarana Fendika. Saripikan'i Ninara avy ao Helsinki, Finland, via Wikimedia Commons CC BY 2.0.
Ao amin'ny tanàna misomebiseby an'i Addis Ababa, Ethiopia, mirohotra ao amin'ny foibe ara-kolontsaina Fendika ny mpitsidika hihaino hanatrika mivantana hira Ethiopiana. Rehefa tafiditra ao amin'io azmari bet (teny Amharika milaza ny lapan-kira nentim-paharazana) io, izay miorina manodidina an'i Kazanchis, dia mahatsapa ianao fa tahaka ny any amin'ireny fivoriam-pianakaviana ireny. Ahitana efitrano maro misy fanaka, ka anatin'izany ny tahalan'ny hira, trano fitaratry ny zavakanto sy fisakafoanana Ethiopiana ary trano fisakafoana kafe, fandraisana ireo nandeha lavitra sy ireo mponina eo an-toerana ary ireo toerana hanehoana hafaliana misitraka hira mivantana sy antsan-tononkalo hatramin'ny taompolo 1990s — fony mbola maro dia maro ny azmari.
Ankehitriny, noho ny fivoarana sy fiitarana haingana dia haingana ao Addis Ababa, dia mitoetra ho hany lapan-kira nentin-drazana tokana ao Kanzanchis i Fendika. Rehefa nanomboka nitantana an'i Fendika i Melaku Belay, mpihira sady mpandihy nentin-drazana, tamin'ny taona 2008, dia nataony ho tahalan-javakanto mivelatra sy feno kokoa i Fendika, nananganany rafitra mba hahatonga ireo mpiasan'ny Fendika miisa 33 handray karama fa tsy tolotolotra. Izany vina napetrany izany no nitarika ho amin'ny fananganana ny Foibe Ara-kolontsaina Fendika tamin'ny taona 2016.
Tamin'ny volana desambra i Fendika nahazo ny loka manandanja Prince Claus avy amin'ny Vatsin'ny Prince Claus avy ao Niederland ho an'ny Kolontsaina sy ny Fampandrosoana, ho fankatoavana ny fiezahan-dry zareo amin'ny fampivelarana ny kolontsaina sy ny fampandrosoana ao Ethiopia. Fendika no iray amin'ireo fito hany nahazo ny lokan'ny Prince Claus taona 2020 nambara tamin'ny lanonana anjotra tamin'ny 2 desambra.
“Ny fifampiraiketana amin'ny mari-panondroanay no manampy anay handroso,” hoy i Belay tamin'ny Prince Claus. “ny mahatonga ny asanay ho tsy manampaharoa dia ny famelomanay ny fomban-drazana amin'ny alalan'ny zavakanto. …Amin'ny alalan'ny zavakanto ihany no hamolavolana fifampiraiketana mahaolombelona lalina,” hoy izy nanohy.
Ankatoavin'ny loka i Fendika ho “mpanetsika” manome aingam-panahy sy manohana ireo fanehoana fahaiza-mamorona — avy amin'ny nentin-drazana ka hatramin'ny amin'izao fotoana — ao anatin'i Ethiopia, ary amin'ny alalan'ny fiaraha-miombon'antoka sy fiaraha-miasa maro dia maro manerantany.
Araka ny tranonkalan'ny Fendika, manao fampisehoana ao isaky ny zoma tapabolana ao amin'i Fendika ny tarika vako-drazana Ethiocolor hatramin'ny taona 2009, “mahazo olona maro dia maro izay mitsangana avokoa ny mpijery ,” sady manana fandaharam-potoana hanao fitetezan-tany manerana izao tontolo izao, hatrany Frantsa ka hatrany Israely, mandalo an'i Etazonia ka hatrany Zanzibar.
Nandritra ny valan'aretina, tratran'ny voina tahaka ireo sehatra sy toeram-pivoriana maro hafa tao Ethiopia i Fendika. Nitsahatra ny fitetezan-tany ary nanapa-kevitra ry zareo ny hanakatona ny Fendika tao Addis Ababa, tamin'ny 16 marsa, andro vitsy monja mialoha ny namoahan'ny governemanta ny taratasy fanidiana ireo toeram-pampisehoana rehetra, ka hotontosaina anjotra amin'ny alalan'ny YouTube sy ny Facebook ny fampisehoana mivantana. Tsy niala vehana mihitsy i Belay raha ilaina ny miditra anjotra noho ny zavakanto ary niezaka izy sy ekipany nanatontosa fampisehoana anjotra na dia tsy mety tapitra aza ny fanamby amin'ny tsy fahamarinan-toeran'ny aterineto sy ny fahatapatapahany noho ny tsy fahamarinan-toerana ara-politika ao Ethiopia.
Tsy afa-misaraka amin'ny hafa-pitiavana, rariny ary firaisankina ny fampisehoan'ny Fendika ary ireny soatoavina ireny no mamela sy mamolavola ny programany rehetra, araka izay hita amin'ity fandaharana mivantana natao tamin'ny 28 mey ity.
Nampitanàka ny mpijery tamin'ny fampisehoana feno angovo sy mahavalalanina nataon'i Belay, filoha mpanorina ny Fikambanana Dihy Ethiopiana, tamin'ny fanaovana eskista, dihy ara-kolontsaina nentin-drazana Amhara izay mifantoka amin'ny fampandihizana soroka haingana dia haingana. Ny fifehezany io endrika dihy io “no nahatonga azy hahazo ny anaram-bositra ‘horohorontany mandehandeha’ sy ‘Mpanjakan'ny Eskista,'” araka ny tranonkalan'ny Fendika. Nampiana-tena i Belay, nianatra ny ankamaroan'ny dihy nentin-drazan'i Ethiopia fony ankizy nihalehibe teny an-dalambe tao Addis Ababa tamin'ny taompolo 1980.
Mpankamamy hira i Belay ary nahazo loka maromaro tamin'ny fiarovany ny zavakanto sy ny fitarihany sady mbola mijoro amin'ny tany ny tongotra amin'ny fitiavany hira, tafiditra amin'izany ireo fotoana mahafinaritra ataon'ny “DJ Melaku” manasongadina ireo kalazan'ny jazz Ethiopiana.
Koa satria andalam-piovana hatrany i Addis ary mihamanjavona amin'ny anaran'ny fandrosoana ny azmaris, dia manohy hiady ho amin'ny fikajiana sy fampivoarana ny hira sy ny vakoka Ethiopiana – indrindra fa ny vakoka azmari – ry Belay sy ny vondrom-piarahamonina Fendika.